नेपालीहरु झन दुःखी ? | Nepal Travel News
नेपालीहरु झन दुःखी ?
चैत, २०७५ काठमाडौं ।
नेपालीहरु अघिल्लो बर्षको तुलनामा झन दुःखी बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘सस्टेनेबल डेभ्लपमेन्ट सलुसन्स नेटवर्क’ ले विश्व खुसी दिवसका अवसरमा सार्वजानिक गरेको रिपोर्टमा नेपाल गतबर्ष भन्दा एक स्थान तल झर्दै १ सयौं स्थानमा पुगेको हो ।
तरपनि खुसीको विषयमा नेपाल छिमेकी देश भारत भन्दा अझै धेरै अगाडि रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । गत वर्ष १ सय ३३ मा रहेको भारत अहिले भारत १४० औँ स्थानमा पुगेको हो । चीन सात स्थानले तल झर्दै ९३ औँ स्थानमा पुगेको छ । पाकिस्तान भने नेपाल र भारत भन्दा धेरै अगाडि ६७ औँ स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै भूटान ९५ औं स्थानमा रहदाँ बांग्लादेश १२५ मा र श्रीलंका १३० मा छन् । सिंगापूरले यसमा ३४ र थायल्यान्डले ५२ अनि दक्षिण कोरियाले ५४ औँ स्थान प्राप्त गरेका छन् । खुसी राष्ट्रहरुको सूचीमा लगातार दोस्रो वर्ष पनि फिनल्यान्डले शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ । फिनल्यान्डपछि डेनमार्क, नर्वे, आइसल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, स्वीडेन, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा र अष्ट्रिया क्रमशः दोस्रोदेखि दशौँ स्थानमा रहेका छन् । जैविक अवस्था, स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता, औसत आयु, सामाजिक समर्थन, उदारता, भ्रष्टाचार लगायतका पक्षमा गरिएको अध्ययनमा आधारित सो रिर्पोटले हरेक वर्ष १ सय ५६ राष्ट्रहरुको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।
अमेरिका भने यो वर्ष अहिलेसम्मकै तल, १९ औँ स्थानमा आइपुगेको छ भने बेलायतले चाहिँ चार स्थान माथि १५ औँ स्थान हासिल गरेको हो । त्यस्तै अष्ट्रेलिया पनि शिर्ष दशबाट बाहिरिदै ११ औँ मा आएको छ ।
मध्य पूर्वमा इजरायल १३ औँ स्थानले सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने त्यसपछि युएइ २१ औँ स्थानमा छ । साउदी अरब पनि खुसी राष्ट्रहरुको सूचीमा २८ औँमा छ र कतार यसैको एक स्थान तल २९ मा रहेको छ । सबैभन्दा कम खुसी देशहरुमा चाहिँ युद्धग्रस्त सिरिया, मालावी, यमन, रुवान्डा, ताजानिया, अफगानिस्तान, अफ्रिकन रिपब्लिक र दक्षिण सुडान रहेका छन् ।